Home News Maxeey Tahay Sababta Kalsoonida Shacabku ku Qabaan Dowlada Hoos Ugu dhacday!!
Maxeey Tahay Sababta Kalsoonida Shacabku ku Qabaan Dowlada Hoos Ugu dhacday!!
Hay’adaha Ipsos Limited iyo Farsight Africa Research ayaa dhawaantan sameeyay sahan lagu ogaanayo kalsoonida muwaadiniinta ee madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa.
Daraasadda hay’adahan oo cinwaan looga dhigay ‘Waxa ay dadka Soomaaliyeed u maleynayaan’ madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa ayaa beegsatay lix gobol oo uu ku jiro gobolka Banaadir ee ay caasimadda ka tirsan tahay.
Marka loo eego xaqiiqada sahanka ka soo baxday 42% muwaadiniinta waxa ay qabaan in kobaca dhaqaalaha uu yahay fadhiid sannadkii la soo dhaafay. Halka 48% ay la tahay in tubtii saxda ahayd lagu socdo. Waxaase jira kala qeybsanaan gobollada ah, Tusaale ahaa shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir 34% muwaadiniinta ku nool waxa ay rumeysan yihiin in waddanka uu ku socdo jiha khaldan.
Waxa ay u tiirinayaan Amni darrada, musuqa, si xun u isticmaalka maalgelinta iyo kobaca dhaqaalaha ee gaabiska ah.
Heerka kalsoonida ay muwaadiniinta ku qabaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ‘Farmaajo’ ayaa si weyn hoos ugu dhacday. Daraasadda ayaa hoosta ka xarriiqday in muddo sannad ah uu lumiyay 19% kalsoonidii ay shacabka ku qabeen. 12 bilood ka hor kalsoonida dadka ee madaxweynaha ayaa ahayd 86% iyadoo haatan gaartay 67%.
Sahanka ayaa soo bandhigay heerka kalsoonida ra’iisul wasaaraha oo si weyn hoo ugu dhacday ilaa ay gaartay 62% halka sannadkii hore ay ahayd 83%. Golaha wasiirrada ayaa ugu liita luminta heerka kalsoonida muwaadiniinta oo ay ka soo dhaceen 86% haatanna ay heystaan 49%.
“Hoggaamiyeyaasha dowladda ayaa si degdeg ah u luminaya kalsoonida muwaadiniinta. Waa muhiim ah in wax laga qabto meelaha aan dul istaagnay in dowladdu ku lumisay kalsoonida, si dadka looga tabasho tiro baahiyahooda” ayuu sheegay Anthony Ndirangu oo ah madaxa Cilmi-baarista ee IPSOS /Farsight.
Kalsoonida ay dadweynahu ku qabaan ciidanka booliska iyo kuwa milatariga ayaa si siman hoos ugu dhacday, ilaa iyo ay gaartay heer ay shacabku aaminaan in ay ku guuldareysteen mas’uuliyaddooda sugidda amniga dalka iyo ilaalinta nabadgalyada muwaadiniinta.
Kalsoonida muwaadiniinta ee madaxda maamul-goboleedyada waxaa lagu sheegay kaliya labo hoggaamiye inay heystaan tiro ka badan 50% kuwaasoo kala madaxweynaha Koonfur-galbeed oo 55% ay shacabkiisa ku kalsoon yihiin halka dhiggiisa Jubaland 52% uu fadhiyo.
Madaxweynaha Puntland Cabdi-wali Gaas ayaa ugu liita oo 31% kaliya ayaa ku kalsoon shacabkiisa, sida ay soo bandhigtay Farsight Africa Research (FAR).
@Xigasho: IPSOS / Farsight Africa Research (FAR)
Previous articleEng Yariisow Oo Ka Dhawaajiyay In Goor Dhaw Lasoo Afmeeri Doono Dhismaha Garoonka Stadium Muqdisho
Next articleXassan Shiikh oo Bedelay Magaca Xisbi Dhawaan Gudoomiye Looga dhigay(AQRISO)
Xog:Baabur Qaraxyo Lagasoo Buuxiyay oo Muqdisho Laga Baadi-goobaayo Iyo Hogaanka ...